Izindlela zokugqoka i-scarf-tube noma scarf ekhanda labesifazane nabesilisa. Ungagqoka kanjani inqama ende ebusika?
I-Scarf iyinambatho enhle ongayifaka ngayo noma ishintshe ngokuphelele isithombe sonke. Izindlela eziningi nemidwebo ehlukene zisiza ukwenza le ngubo ibe mnandi nakakhulu. Ngisho nemifula ebusika ebusika ingahle ibonakale imfashini futhi inhle kakhulu. Namuhla sizokutshela ukuthi ungembatha kanjani inqama ende ebusika, ijoka, ipayipi nezinye eziningi. Futhi uzofunda ngokuwina izinhlanganisela zendwangu.
Indlela yokugqoka ukhilimu ehlobo?
Yiqiniso, wonke umuntu uyazi injongo yesikhala ebusika, kodwa akubona wonke umuntu ocabanga le nto yokugqoka i-wardrobe ekushiseni kwehlobo. Izinhlobonhlobo zendlela yokuhlukanisa isithombe sakho sasehlobo.
I-turban ekhanda. Isinqumo esinamandla kakhulu nesibindi. Le ndlela ayifanele wonke umuntu we-fashionista. Ngokuvamile, i-turban ibukeka kahle kuma-brunette amade anezici ezifanele.
Futhi kuyadingeka ukuba unakekele izingubo ezifanele. Kuzozuzisa ukubheka iziketi ezansi noma ingubo ende. Ngezansi ungabuka ividiyo mayelana nokubopha ingubo.
Ungakwazi ukubopha isikebhe ngonxantathu. Thatha indwangu yesikwele bese ugoqa entanyeni ngendlela yokuthi unxantathu utholakele. Imikhawulo kufanele ibe ngaphambili, kodwa ungakwazi ukuyibopha.
Ngesikhathi sokuphuma kusihlwa, isikebhe esiboshwe ngesifani siphelele. Gcoba indwangu ezungeze amahlombe, bese ubopha izinkinobho kuze kube sekugcineni. Khumbula, ngoba ihlobo likhetha kuphela amathishu okukhanya nokuphefumula.
Ukugqoka kanjani isikhafu esifushane?
Imifuno emifushane ingabuye ibe yinto ekhangayo.
Nazi izindlela ezimbili ezithakazelisayo zokugqoka isikhafu esifushane.
Indwangu yesilikhi ingaboshwa ngesimo somnsalo. Yenza "i-accordion" futhi phakathi ubophe iqhaza. Gcoba isiqephu esiseduze entanyeni ukuze idayini lingaphansi kwesikhumba. Beka amathiphu ajika ngapha nangemva. Bese ubakhipha ngokusebenzisa i-knot ukuze uthole amandla.
Ukotini noma uboya obuncane isikhumba siphelele ngengubo. Faka indwangu ngendwangu bese uyibeka entanyeni. Imikhawulo iwela kabili ukusuka phambili, bese iguqula emuva, uyibophe efonini.
Izindlela zokugqoka isikhala ebusika
Enye yezindlela ezithandwayo zokubopha isikhala eside ukuwufaka kabili entanyeni, futhi ekugcineni ukukhulula phambili.
Futhi ibukeka kahle kakhulu ebheka isihenqo, ehlanganiswe kanye nxazonke entanyeni. Kulungile uma indwangu isinephethini noma iphethini. Ngakho, uhlangothi olungaphambili nesithombe luhlala phambili, futhi ukuphela kwesibili kuyawa ngemuva.
Ukuphoqa noma ukuhlala kwesikhumba kuhlala ekuphakameni kokudumile futhi kule nkathi. Izinto ezinamazinyo ezinamahlumela zivumela ukuthi udale amafolda amaningi entanyeni. Gcoba izicubu entanyeni yakho izikhathi eziningana, bese ubeka iziphetho phansi. Futhi, ama-snoods aphelele, angafuni ukuhlanganiswa okuzimele.
I-pipuni-sopheji igqamile cishe nejoka. Kodwa-ke, ipayipi ivame ukubonakala ngokunciphisa okuncane futhi ihlangene ngokuphelele namajack, ama-raincoats, amajazi, ama-vest kanye nama-sweaters. Le sikhafu ingaba yinto engavamile futhi enhle kakhulu.
Izinketho zeholide ezinezinhlayiya, ama-sequin kanye ne-sequin zizohambisana nesambatho sakusihlwa.
Ividiyo ngezindlela zokugqoka isikhala ebusika
Ungakugqoka kanjani isikhala kumuntu?
Kunezindlela eziningi ezithakazelisayo zokugqoka isikhala samadoda.
Iphuzu laseParis. Kubheka okuhle ngejazi lesikhumba lesincane kanye nekhola encane. Imiphetho ingashiywa ngaphandle noma ifihliwe ngaphakathi.
I-node eyodwa. Inguqulo yentsha ye-sweatshirt, i-windbreaker noma ijeti lezemidlalo. Inikeza isithombe isithombe esibi, esingafaneleki.
Iphuzu elibili. Kunezindlela eziningi zokubopha ifindo kabili. I-node yokuqala ingenziwa ibuthakathaka, futhi eyesibili ingagcinwa ngokuqinile. Imikhawulo izobukeka ikhululekile noma ivinjiwe ibe yinothi.
Iqembu eliyingozi: yini engalungile ngezimhlobiso zethusi nezethusi?
Izifiso eziyishumi ezithandekayo: iqoqo lamascots Amulette de Cartier
Isitayela sasePetersburg: "ukukhuluma" namasongo Izeso & iminwe
Umshado wegolide: yakha umcebo
Izakhiwo zokuphulukisa zama cherry
UNastasya Samburskaya wafanisa yena no-Olga Buzova
Umyeni wami ungu-Lovelace
I-Spring Photoshop-make-up: Amathuluzi we-TOP-3 wokubukeka okuphelele
Yeka ukuthi ungatholi isisindo emva kokudla
Isinkwa kusuka ku-herring, ithanga nama-apula
Ukusetshenziswa kwe-viburnum emithi
Kunokuba ususe upende kusuka ezembathweni ezimweni zendlu?